समय सन्दर्भ – “छ हिम्मत ?” :: Press Chautari ::
हिजो मध्येरातबाट एनआरएन अमेरिकाको मतदान प्रक्रिया सकिएसँगै अमेरिकी एनआरएन नेतृत्वका दाबेदारहरुलाई केहि हाईसञ्चो भएको छ । बिभिन्न राज्यहरुमा आयोजना भएका बहस, छलफल र अन्र्तक्रियाहरुमा भ्याँई नभ्याँई देश दौडहामा निस्केका उम्मेद्वारहरु अब चुनावी परिणामको दिन गन्दै र मतदाताहरुको हिसाब किताब गर्दै साबिककै दिनचर्यामा फर्केको यो पंक्तिकारको निजी अनुमान हो ।
निश्चित् हो चुनावमा पक्ष प्रतिपक्ष हुन्छ । प्रतिपक्षभन्दा आफु उम्दा ठहरिन अनेक तिकडम गर्नु पर्ने हुन्छ । अमेरिकी एनआरएनहरुले पनि यसै गरे । लाग्छ हामीमा एउटा गलत नजिर बसीसक्यो । चुनाव भन्नसाथ आर्थिक जोहो, गुट उपगुट, प्रचार प्रसार अनेकथरी सभा र सम्मेलनको आयोजना । मानौं हामी अमेरिकी भुमीमा एनआरएन नेतृत्वको लागि देशकै संसदीय चुनाव गर्दैछौं । जहाँ मान, सम्मान, शक्ति, सार्मथ्य, तलव सुविधा सप्पै सप्पै प्राप्त छ ।
“बि पोजेटिभ” नै सहि, हामीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्यो ।
तर सिक्काको अर्काे पाटो पनि छ भनेर भुल्नु हुँदैन हामीले । र त्यसको “नेगेटिभ” परिणामको बारेमा पनि बहस हुनु जरुरी छ ।
न्युयोर्कको ज्याक्सनमा भेटिएका एक उम्मेद्वार भन्दै थिए–“एनआरएनको चुनावमा खर्चेको डलरले त नेपालमा सभासद नै पो जितिन्थ्यो होला ।” मैले भने,-महोदय, दिशाबिहिन दौडीने मात्रै हो भने उता वडा सदस्य जित्नु गाह्रे होला, यता अमेरिकामा पैशावालहरु कैयौं छन्... ।”
यत्तिकैमा महोदयको आईफोन-६ मा टेलिफोनको घण्टि बज्यो । दुर्भाग्य पुनः संवाद हुन सकेन ।
मैले यसअघिको आलेखमा पनि एनआरएन अमेरिकालाई पहाडको संज्ञा दिएको थिए । दर्जनबाट हजारौंको संख्यामा सदस्यता बृद्धि हुँदै जानु, कुनै क्षेत्र र राज्य केन्द्रित संस्था पुरै अमेरिकाका नेपालीबीच फैलिनु र यावत् कारण पहाड बन्दै गएको मेरो निजी ठम्याँई हो । थाह छैन अग्लिदै गएको यो पहाड थाम्ने साहस आगामी नेतृत्वमा छ वा छैन । यसर्थ यसो भनुँ, सार्मथ्य छैन भने पहाड उचाल्ने दुश्साहस नगरौं । शूरुमा फोक्टा र लढेका कान्लाहरु उठाऔं । कथम्कदाचित यो पहाड ढल्यौ भने सक्छौं त जिम्मा लिन ? छ सार्मथ्य ? छ हिम्मत ?
केहि दिनपछि चुनावी परिणाम सार्वजानिक हुँदैछ । परिणामले सबैलाई विजयी बनाउँदैन । अब थोरैले जीत र धेरैले हारको लागि तयार हुने बेला आएको छ । हारको लागि तयार हुनुहोस् । जीतमा त सबैले जयजयकार मनाउनेछन् । जीतेकाहरुलाई छर्काई दिएको अबिरको रंङ् तपाई हारेको मान्छेको अनुहारमा सुहाउँदैन । र सुहाउँदैन तपाई हारेर बिद्रोह गरेको । अहँ पटक्कै सुहाउँने वाला छैन अरु जितेर तपाई हार्दा गुनासो र विलाप गरेको ।
जिन्दगी नै हारेको कहाँ हो र ?
समाजलाई केहि दिन्छु, आफ्नै समाजलाई माथि उठाउँछु भन्ने पवित्र अनि निःस्वार्थ भावनाले अघि बढेको मनुवा कहिल्यै हार्दैन । हामी यसपाली पनि कोहि हार्ने छैनौं । दुई/चार मतले पछि परेको तपाई कदापी थाक्नु हुँदैन । प्रवासमा नेपाली समाजको विकास, समृद्धी र स्त्तरोन्नतीको लागि तपाई जो कोहि नथाँक्नुस है..? हो... यक्ति बेला कति सुहाउँछ तपाई हारेको पनि । अबिर मालाले मात्रै सुहाउँने तपाईको शरिर कुनै धातुको निर्जीव मूर्ती हो र ?
उता जित्नेहरुले के नै जित्ने हुन् र ?
जायज नै हो । के के नै जित्ने हुन् र ? अमेरिकाको नेपाली समाजमा एनआरएनको लागि भनेर कुनै ठूलो कुर्सी छैन । तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा केहि हुने होइन । होला केहि नाम र प्रतिष्ठा । तर त्यस्ता नाम र प्रतिष्ठा भएका नेपाली संघ संस्थाहरु हजारको संख्या भन्दा माथि छन् यहाँ ।
यसर्थ चुनावी प्रक्रियामा हारेर पनि प्रवासी नेपाली समाजको हितको जीतमा तपाई हरुवा उम्मेद्वारहरु एनआरएन अमेरिकाको अघिल्लो मोर्चामा उभिनु पर्छ । जितेर जयजयकार मनाउने जितुवा उम्मेद्वारहरुको राम्रा कामहरुको सर्हाना गर्दै गलत र नराम्रा कार्यहरुको भत्सर्ना गर्दै तपाई हज्जारौं मतदाताहरुको अगुवा भएर हिड्नु पर्छ ।
र अन्तमा अप्रिल २५ तारिख शनिबार न्युयोर्कमा मतगणनासँगै अन्तिम परिणाम घोषणा हुदैछ । परिणामको जीत/हार मध्ये कुनै आफ्नो भागमा पर्न सक्छ । जितेकाहरुले हर्षाेल्लास मनाउँदै ज्याक्सन हाईट्सको रेल स्टेसन पुग्दा-नपुग्दै सत्यनारायण मन्दिरमा लगाएको अबिर मैलो र फोहोर मानेर नटक्टकाउनुहोस् । तपाईका मतदाता दुई बर्षपछि हुने अर्काे निर्वाचनमा उस्तै रङ् र आकारको कोट खोज्दै हिड्नेछन् ।
बस यत्ति ।
बुधवार, २०७२ बैशाख ०८ गते ०१:१० / Wednesday, Apr 22, 2015 1:10 am